कोशी विद्या मन्दिरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २२ कार्तिक २०७४, बुधबार १५:४४
Cialis Professional for sale, zithromax reviews. विराटनगर, २२ कात्तिक । विराटनगर–१० मा रहेको कोशी विद्या (केभिएम) मन्दिरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ । विराटनगरमा रहेको न्यूरो हस्पिटलको प्राबिधक सहयोगमा बुधबार स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको हो ।
स्कूलमा अध्ययरत विद्यार्थीहरुकोहरुको लागि न्यूरोको हस्पिटलको विशेषयज्ञ चिकित्सवहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको स्कूलका निर्देशक राजेशकुमार दासले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य परीक्षणमा स्कूलका अध्ययरत प्ले ग्रुपदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । शिवरमा सहभागि भएका अभिभावक नम्रता भट्टराईले यस्तो खालको स्वास्थ्य शिविरबाट हाम्रा नानीहरुको स्वास्थ्यको बारैमा जानकारी पाइरहिन्छ ।
उहाँले भन्नुभया ्, ‘स्कूलले यस्तो खाले शिविरलगायत अतिरिक्त कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा पनि गर्दै जानु पर्छ । ’ विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण न्यूरो हस्पिटलका बरिष्ठ नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषयज्ञ डा. शुरेसप्रसाद साह र डा. फणीन्द्र साहलगायतको टालीले स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए । त्यस्तै स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रेणु राठीले महिला अविभावकलाई स्त्रीरोगको स्वास्थ्यबारैमा अभिमुखिकरण गर्नु भएको थियो ।lisinopril
आफ्नै नाबालिक छोरी बलात्कार गरेको आरोपमा बुबा र काका पक्राउ